२ जेष्ठ, २०७७ – Mero UK
Day: २ जेष्ठ, २०७७
नीति कार्यक्रममाथि अर्थविदको टिप्पणी : बजेट भद्दा बन्ने भो !
२ जेष्ठ, २०७७ २ जेष्ठ, २०७७ / अनलाइन खबर
२ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको बाचन गर्दागर्दै राष्ट्रपति थकित मुद्रामा देखिइन् । करिब १५६ मिनेट वाचनमा खर्चिएर गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारबाट कस्ता योजना आउलान् भन्ने लगभग छर्लङ्ग भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान अवस्थाको वास्तविक मूल्यांकन नगरी आएको अर्थ व्यवस्थाका …
नीति कार्यक्रममाथि अर्थविदको टिप्पणी : बजेट भद्दा बन्ने भो ! Read More »
कोरोना संक्रमितको संख्या २६७ पुग्यो, शुक्रबार १८ जना थपिए
२ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा शुक्रबार एकै दिन १८ जना कोरोना संक्रमितको पुष्टि भएको छ । शुक्रबार बिहान र साँझ ९/९ जना गरी १८ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कूल संख्या २६७ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शुक्रबार बिहान मकवानपुर र बाँके तथा साँझ काठमाडौं, » पुरा …
कोरोना संक्रमितको संख्या २६७ पुग्यो, शुक्रबार १८ जना थपिए Read More »
नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीका के छन् योजना ?
२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष युवाहरुलाई उद्यमशील बन्नका लागि सरकारले सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले उद्यमशील बन्न चाहने युवाहरूलाई यस्तो सुविधा दिने घोषणा गरिन् । नयाँ उद्यम गर्न सरकारले युवाहरूलाई पनि सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराइने …
नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीका के छन् योजना ? Read More »
नीति तथा कार्यक्रम– कृषि, उद्योग र वाणिज्यमा अधिकांश पुरानै
२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । देश झण्डै दुई महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा रहेको र कोरोना महामारीको सम्भावित असरसमेत पूर्वमूल्याकंन नभईसकेको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई जानताले चाख पूर्वक हेरेका थिए । अझ जनताको जीवन निबार्ह तथा जिबिका र तथा निजी क्षेत्रलाई …
नीति तथा कार्यक्रम– कृषि, उद्योग र वाणिज्यमा अधिकांश पुरानै Read More »
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमाथि बलात्कारको आरोप
२ जेठ, वीरगञ्ज । सशस्त्र प्रहरीका एक जना प्रहरी निरीक्षकमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ । पर्साको ठोरी गाउँपालिका–५ सुवर्णपुरस्थित बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) का प्रहरी निरीक्षक सागर मल्ल ठकुरीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको हो । स्थानीय १४ र १६ वर्षीया दुई जना युवतीलाई ललाई फकाई होटलमा लगेर यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप पीडितका आफन्तले उनीमाथि लगाएका छन् …
सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमाथि बलात्कारको आरोप Read More »
२ जेठ, काठमाडौं । कोरोना संकटबाट आहत भएर लकडाउनमा थुनिएका जनताले कम्युनिस्ट सरकारबाट गतिलो राहतको प्याकेज आउला भन्ने सोचिरहेका छन् । तर, सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कानुनी कारवाहीको धम्की आयो, राहतको प्याकेज आएन । शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत ६३ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा ‘राहत’ शब्दै छैन । २७६ वटा बुँदाहरु रहेको …
कारबाहीको ‘नीति’ आयो, राहतको ‘कार्यक्रम’ आएन Read More »